Ny fitomboan'ny Mponina an-tanàn-dehibe dia nahitana banga be eo amin'ny vokatra Fresh Farm tonga amin'ny mpanjifa ara-potoana sy amin'ny kalitao tsara.
Ary koa ny fanovana ny fahazarana mihinana ny mponina an-tanàn-dehibe amin'ny sakafo sy zava-pisotro voadinika, dia nahita fiakarana lehibe teo amin'ny indostrian'ny fikarakarana sakafo, hitazomana fenitra avo lenta amin'ny fahamendrehana sy ny kalitao.
Ny angovo sy ny rano no hery afovoan'ny indostrian'ny sakafo sy zava-pisotro dia manome tsindry hatrany hahitana sy hamorona teknolojia mandroso izay tsy hitsitsy angovo sy rano fotsiny fa hitazona ny vidiny ho amin'ny ambaratonga azo ekena ihany koa.
Misy hazakazaka Iraisam-pirenena eo amin'ireo orinasa eo amin'ny sehatry ny sakafo sy ny zava-pisotro ary tompon'andraikitra amin'ny fitadiavana vahaolana maharitra amin'ny asany. Vokatr'izany, ny ezaka atao mba hiantohana ny kalitao, ny fahombiazany ary ny fahamendrehana dia tsy maintsy mifandamina.
SPL dia manolotra vokatra fitsitsiana angovo toa ny Evaporative Condenser, Hybrid Cooler ary ny tilikambo fanamafisana modular ho singa lehibe amin'ny indostrian'ny sakafo sy zava-pisotro - miainga amin'ny vahaolana avo lenta indrindra hatramin'ny fampiharana tsirairay. Na aiza na aiza misy ny fanafanana na ny fampangatsiahana dia hahita vahaolana mitambatra avy aminay ianao - iray izay tsy handray ny tombontsoanao fotsiny, fa ny an'ny mpanjifanao koa. Izahay dia mpiara-miombon'antoka aminao azo antoka mandritra ny rojom-panadinana miharo vidy.